Mpanamboatra sy mpamatsy akrilika extruded - orinasa vita amin'ny akrilika voafafy any Sina
Ny birao akrilika mangarahara tafahoatra dia mampiasa PMMA plastika mamolavola avo lenta an'ny orinasa malaza any an-trano sy any ivelany ho toy ny akora ary manangana fomba extrusion ho an'ny famokarana lehibe miaraka amin'ny fitaovana mandroso. Ny vokatra dia manana fandeferana kely sy fahombiazan'ny vidiny lafo.
1mm Acrylic Sheet extruded akrilika ravina dia vokarin'ny dingana famokarana mitohy. Ny pellets acrylic na PMMA dia omena avy amin'ny silo mifono ka hatramin'ny hopper feed eo ambonin'ny tsipika extruder.
Ny akrilika antsoina koa hoe PMMA dia vita amin'ny methacrylate methyl ester monomer. Miaraka amin'ny toetra mampiavaka ny mangarahara tsara, fitoniana simika, fahaizan'ny toetr'andro, mora tasy, mora fanodinana ary bika mahafinaritra, efa be mpampiasa amin'ny indostrian'ny fanamboarana, fanaka ary dokam-barotra.